झुक्किएर पनि नसुनाउनुहोस् यी ७ सपना !
दिनभरिको थकाइ वा आराम प्राप्त गर्नका लागी मानिसहरू सुत्ने गर्दछन् । तर जब मानिस सुत्छन् तब विभिन्न किसिमको दृश्य देख्छन् । जसलाई हामी सपना भन्छौं l कतिपय मानिसहरूको आफूले देखेको सपना बारे अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सुनाउने बानी हुन्छ । हुन त आफूले देखेको सपना सुनाउनु कुनै आपत्तिको कुरा होइन । तर तपाईँले देख्नु.....
समयले परिवारलाई आज एकल परिवार प्रणालीमा परिवर्तन गरिदिएको छ । सानैदेखि छोरीहरुलाई बुबाको प्यारी मानिन्छ । त्यसैले त छोरीहरुका लागि उनको आदर्श नै बुबा हुन्छन् । तर, समस्याको कुरा के छ भने विवाहपछि छोरीहरु आफ्ना श्रीमानलाई बुबाको जस्तै तौर-तरिकामा ढाल्न सक्दैनन् । छोरीहरु हरेक समय आफ्नो श्रीमानमा बुबाको.....
बालिकाको विवाह गर्न लागेको महिला अ’धिकारकर्मीहरुले प्रहरीमा दिएको सू’चनाका आधारमा प्रहरीले बुधबार बालविवाह रोकेको छ । १८ वर्षीया सपना सुवेदीको विवाहको तयारी भइरहेको थियो । लिं'गाचौका गरेर हिजो सबैले साइत गरेका थिए ।गाउँबासी जम्मा भएका थिए । गजुरी–६, मिलनटार निवासी धु्रव सुवेदीले छोरी बालिका भएपनि.....
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका यी दुर्लभ १३ तस्बिर !
चार वर्षको उमेरमा राजा बनेका उनी दाजु तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको दरबार ह'त्याका'ण्डमा मा'रिएपछि २०५८ सालमा राजा बने नेपालका शाहवंशीय अन्तिम राजा हुन्, ज्ञानेन्द्र शाह । दुईपटक राजा बनेका उनी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि स्वदेशमै बसेर विश्वमै उदाहरण प्रस्तुत गरे । देश विदेश घुमिरहने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले.....
गंगा अधिकारी गौली (असई) जमुना अधिकारी कार्की, बेली अधिकारी बस्नेत, तारा अधिकारी बाँस्तोला (हवल्दार) नेपाल प्रहरीमा तलाखु–९ नुवाकोटका एकै परिवारका ६ जना दिदिबहिनी प्रहरीमा कार्यरत छन् । एउटै परिवारका ६ जना दिदी–बहिनी नेपाल प्रहरीमा जागिरे भएको मानिसलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ । नेपाल प्रहरीमा तलाखु–९.....
यस वर्षको होलीमा निकै ठुलो अद्भूत संयोग परेको छ । यस वर्ष आगामी फागुन २६ गते बेलुकी होलिका दहन हुनेछ । यस दिन नेपालका पहाडी जिल्लामा होली खेलिनेछ । भोलिपल्ट फागुन २७ मा तराइका जिल्लामा होली खेलिनेछ । होलिका दहन सोमबार पर्नु आफैंमा शुभ संयोग हो । ग्रहको यो अद्भूत संयोगमा पर्ने होलीले शुभ फल दिनेछ । यस्तो.....
मान्छेहरु कहिले जापान काण्ड भन्छन्, कहिले अस्ट्रेलिया काण्ड भन्छन् । मोबाइल र कम्प्युटरमा लुकीलुकी एक्लाएक्लै हेर्छन् । मन मिल्ने साथीलाई देखाउँछन्, मिलेर फेरि हेर्छन् । कतिले मुख रातो पार्छन्। तर जापान र अस्ट्रेलिया काण्डलाई ओझेलमा पार्नेगरी आफ्नै देशमा हाकाहाकी काण्ड भैरहेका छन् । न लुकेर हेर्नु.....
मानिसको प्रेम–कथा र कहानी पनि आ–आफ्नै किसिमको हुन्छ । र, यो कथा लगभग ६५ बर्ष अगाडीको हो प्रेमको परिभाषा व्यक्तिको निजी भोगाइ, बुझाइ र परिवेशले निर्धारण गर्छ । मानिसले आफ्नै किसिमले प्रेमलाई बुझ्ने र अर्थ दिने गर्छन् । मानिसको प्रेम–कथा र कहानी पनि आ–आफ्नै किसिमको हुन्छ । र, यो कथा लगभग ६५ बर्ष अगाडीको हो.....
वासिङ्टन २१ जनवरी- चर्चित टेलिभिजन होस्ट वेन्डी विलियम्स पछिल्लो समय चर्चा र विवा'दमा अाएकि छिन् । ‘द वेन्डी विलियम्स शो’ होस्ट गरिरहँदा वेन्डीले ‘लाइभ शो’ मै पादेको भनेर उनका प्रशंसकले व्यंग्य र आलो'चना गरेका छन् । हालैको एक शो को भिडिओमा समेत उनले पा'देको आवाज प्रष्ट सुनिन्छ । वेन्डीको उक्त भिडिओ हाल.....
श्रीमानले साउदीको ५५ डिग्रीको घाममा पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पति कुम्ल्यार श्रीमती बेपत्ता भएपछि श्रीमान रुँदै मिडियामा आएका छन् । उनले श्रीमती खोजीदिन र सम्पत्तीको रक्षा गरिदिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । श्रीमानले विदेशमा कमाएको सुन र पैसा बोकेर चितवनकी एक महिला स’म्पर्कविहिन भए पछि उनका श्रीमान रुँदै.....